Gadabuursow shahiid ku dhinta inta dadqalatadu idin qali laheyd !!! | Awdalstate.com – Xariiradonline.com – Xariiradnews.info	Members Login: Log in	Subscribe to our RSS feed
QALIN WADAAGA IYO ARIMAHA BULSHADA
Gadabuursow shahiid ku dhinta inta dadqalatadu idin qali laheyd !!!
December 9, 2011	· 0 Comments	Gadabuursow shahiid ku dhinta inta dadqalatadu idin qali laheyd !!!
Salaanta guud wixii ka dambeeya, Walaalayaal waxaan wada ogsoonahay fidmadii iyo dhagartii qaawaneyd ee wuxuushta dadqalatadu geysteen. Dhiig-acabkii mujrimiinta ahaa ee heystay taageerada dowlad ku sheega SNM ee uu hogaaminayo ninka ku caam baxay qabiil-takoorka iyo jinsi naceybka ee ku magacaaban Siiraanyadii dhinac walba u carareysey markale muuji dhaqan xumadii lagu yaqaaney. Nacalaa ku taalee dadqalatadu waa dad ka duwan dadyowga aduunka dhamaantood. Nacdal baa kusoo dagtee waa mid yaguuni isku muujiyeen caalamka inay gooni u tahay dhaqan dadyowga caalamku laheyn oo ah dadqalato. Nacdasha jidh xunta ah meel walba laga nacdaley meel walba laga ogaa iney yihiin bar modow oo ku taala caalamka loona baahanyahay in wadajir looga takooro binu-aadamka Illaahey dajiyay dunidiisa.
Inaa Lilaahi Wa inaa Ileyhi Raajicuun. Kuli Nafsun Daaiqatul Mowt… Wixii Ilaahey qoreyna marna la joojin maayo …
Walaalayaal, aan u duceeyo shuhadadii gardarada lagu qalay ee aamiin ila dhaha;
Ilaaha qaadirii naxariistii jano ha siiyo
Ilaaha qaadirii janatul fardowsa haka waraabiyo
Ilaaha qaadirii xabaalahooda ha uga dhigo jano raaxo ah
Aamiin Yaa rabul calamiin !!!
Walaalayaal waxaan ku xigsiin aniga oo ku hadlaya afka dhamaan dadyowga aduunka ee nabada jecel guud ahaan gaar ahaana magaca Soomaaliyeed iyo reer Awdal State tacsi tiiraanyo leh oon u dirayo dhamaan qoysaskii, ehelkii caruurtii iyo qaraabadii ay ka baxeen mushaahidiintaasi. Islamarkaana idhaaho Samir iyo iimaan Allaha inaga siiyo. Dhamaan dadka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaanba ee ka xumaadey kana naxay ee ka jidhiidhicoodey dhaqankaa foosha xunle ee dadqalatada reer Gabiley ku kaceen aan yagana idhaahdo samir iyo iimaan Allaha dhamaanteen inaga siiyo. Dad weynaha reer Awdalna aan idhaahdo walaalayaal samir iyo iimaan Allaha inaga siiyo.
Ku Socota Soomaali oo dhan meel ay joogaamba;
Walaalayaal Soomaaliyay dadkaa reer Awdal ee la qashay waa dhagar laga galay dadkey ka dhasheen iyo intay dhaleenba. Waa dhagar laga galay reer Awdal. Waal dhagar laga galay Soomaalil dhamaantood. Waa dhagar laga galay diinteena macaan. Waa dhagar laga galay dhaqankeena suuban. Waa dhagar laga galay magaceena wanaagsan ee Soomaaliyeed ee nadiifta ahaa. Soomaaliyay dhagartaa duulka naaquskii ay faleen waa bar madow oo ku taala magaceena. Waa markii sadexaad ee ay fal sidaasi ah sameeyaan. Waa bar madow oo ay ku dhajeen dahqankeena wanaagsan oo caalamkuna inagu wiirsanaayo. Waa bar madow oo ku taala caradeena. Waa bar madow oo ku taala dhiigeena Soomaaliyeed. Walaalahayow Allaha u naxariisto marxuumiinta ee maanta ta ina saaran dhamaanteen waa inaan iska takoorno duulkan u dhaxeeya dugaaga iyo dadka ee dadkeenii qalanaaya.
Walaalahayow waa arin dhamaanteenba inoo taala guud ahaan. Gaar ahaana reer Awdal ee aan iska takoorno oo caradeena aanka sifeyno dhiig acabkaa dowlada Siiraanyo taakuleyneyso. Walaalaheyga Soomaaliyeed ee daafaha dunida kala joogow taageera reer Awdal oo is garab taaga si aan u dumino dadqalatada iyo dowladooda SNM ee Siiraanyo u sareeyo. Walaalaheyga Soomaaliyeedow badbaadiya magaceena iyo dhaqankeena oo taageera reer Awdal si aan iskaga jarno ceebta ina dulsaaran ee aduunweynuhu inagu caayi. Walaalahayow diida SNM dowladeeda uu Siiraanyo u sareeyo.
Ku Socota Calool u shaqeystayaasha shilimada Siiraanyo sidii eyda ugu tuuro;
Kuwa yaga qudheedu naaquska noqdey damiirkoodu iyo damqashadoodu, kuwa uu daciifoobay dadnimadoodu, ee uu duugoobey qalbigoodu, kuwa doolar ku doorsadey dadkooda ee Siiraanyo u shaqeeya ee waliba maanta ta dhacdey daba nashleynaaya ee dadqalatada cafis u raadinaya aan idhaahdo waa la idinku yaqaaney doqoniimada idin saaran ee maantana sii ogaaney in dhiigiina la doorshey oo basaas uu dul saarey Siiraanyo.
Waxba meydin yeelin Gadabuursi ee dhareerkii hore idiinka hooriyaayay uun baad sii badiseen. Sida ay SNM u noqotey bar madow oo ku taala Somali ayaad idinkuna ugu noqoteen tolkiin Gadabuursi. Haday awal aheyd barada foosha xun ee idinka baxdey foolxumo qushigeedee ha idinku taalo oo u adkeysta, maanta taasi wey dhamaatey oo Gadabuursi xanuunka wuu u adkeysan waana la idinka jarayaaye Siiraanyo weydiista inuu tolkii liiskooda gadaal meel idiinka baneeyo.
Siiraanyo iyo dowladiisu way dhamaani oo sida ay u dhowdahay dhakso wey uga dhaqaajin ee kuwiinaa tolkood ka hor jeestayow ee SNM ta Siiraanyo dabanashleynayow ogaada taariikhdu ma duugowdo oo halkaad ka gasheen hortiina kol ahaan waa la keeni.
Sida aad u ogolaateen in dhagar qabayaasha SNM taariikhdooda madow loo dhigo caruurteena ayaa taariikhdiina madow iyo damiir xumadiina loogu dhigi dugsiyada Awdal State.
Gadabuursow difaaca magaciina oo kor u qaada dadnimadiina
Waa himiladooda Siiraanyo iyo SNM tiisa iney xaqa gadabuursi qariyaan islamarkaana dhulkooda boobaan. Waxase u qarsoon ujeedo ay rabaan iney saameyn ku yeelato caruurteena abidkood. Taa waxa ka markahaati ah sida foosha xunle ee dadkeena loo dilaayo. Gadabuursow dadku wey isdilaan laakiin iskuma dilaan sida waxshinimada leh ee SNM u dileyso dadkeena. Qasdiga uga dambeeyana waa caruurteena oo lagu abuuro damiir daciifa (low self-esteem) si ayna caruurteenu u horjoogsan caruurtooda una waajihi Karin.
Hitler baa ka xishoodey oo damiir yeeshey inuu Yuhiidii ku gubo dadkooda hortooda oo wuu ka qarin jiray oo intoo meel lagu guro ayaa lagu gubi jirey. Xitaa janaraal Canjeex baa qarsan jirey dadkii Isaaq ee uu dilayay oo Jasiira la tagi jirey. SNM tuna intey dadkeena gaadmo ku dilaan ayay googooyaan markaasaa horteena lagusoo tuuraa si aan u wada aragno oo ay inoogu noqoto nabur iyo daciifnimo-dadnimo oon waligeed inaga hadhin inaka iyo caruurteenaba.
Waxyeelada ay dadnimadeena iyo ta caruurteenaba Gadabuursow u geysteen SNM-ta Siiraanyo sida qudha ee caruurteenu badbaado ku heli karaan una waajihi karaan qeyrkood waa yaga oo arka ta loo geystay tu lamid ah oo dadka reer SNM iyo caruurtoodu arkaan. Taas macnaheedu waa aarsi loo aaro dadkeenii la qashey oo dadkeena iyo caruurteenuba arkaan in loo aarey dadkoodii xaqdarida lagu qashey. Aarsi waa dawada caruurteena ee halaga badbaadsho tiiraanyada caruurteena qalbigooda.
Dadqalkii Ina tani ayaa waliba inoo qudbadeeyay
Sharaf male dadqalato gadabuursow. Hana ku talo galina in ay yeelaan reer SNM oo ay fuliyaan qodobadii salaadiinteenu iyo odayaashuba dalbadeen ee aheyd in lasoo qabto dhagar qabayaashii oo horteena lagu qisaaso. Waa hubaal oo ma rabaan Siiraanyo iyo colkiisu iney fuliyaan arintaa ee ha ku daalina wakhtina yuuna idinkaga lumin ee aarsigiina ku toosa.
Hadii ay sharaf iyo dadnimo SNM tu leedahay damiirkoodu ma siiyeen iney jaahilkii waa janaraal la lahaa ee qashey dadkeena intoy horkeenaan talafishanka (TV) uu waliba inoo qudbadeeyo. Dhulku markuu gariiro ayaa la yidhaahda kuwa khafiif ah ayaa ka dambeeya (after- shocks). Qudbadii Canjeex dadqal ee ina Taani sidaas bey ka dhigneyd. Wanaag hadey ku talo galeen iyo xushmo sidaa ma yeeleen ee Gadabuursow arimihiin aarsi ku toosa.
Abgaal baa loo xidhey dadqalkii ina Tani baad ku tilmaamtey Canjeex
Sharaf iyo wanaag walaa dadnimo male dadqalato SNM-ta Siiraanyo gadabuursow ee wakhti ha inaga qaadina ee danaheena aan ku toosno. Haday sharaf leeyihiin dadqalatadu, yada oo dadkii ay qasheen geeridooda loo fadhiyo oo dhiigii ay daadsheeni qoyanyahay kumey kaceen iney nin Samaroon ah oo runta ka sheegay mujrimka ina Tani xabsiga u taxaabshaan. Gadabuursow rageeni la qashey oon geeridoodii fadhino oon lasoo qaban dhagarqabayaashii oo wali suuqa ay meerayaan oo waliba dhiig acaab ina Tani inoo qudbadeeyay ayaa siyaasiga Abgaal ee reer Awdal loo xidhey Tani baad ku tilmaamtey Canjeex.
Gadabuursow arinteena aan ku toosno. Foolxumo ina gaadhey oo hoos uunbaa la inoo wadaa. Waa dhirbaaxo tobnaad in nin Samaroon ah yada oon ognahay waxa dhacey lagu xidho dhagar qabaad ku tilmaamtay dhagar qabe oo waliba rasaastu ka qeylido Borama gudaheeda yada oo lala dayanayo dhalinteena. In lasoo xidho dadqalkii baa la filaayee ma ina taani baa inoo qudbadeeyay oo waliba waa la caayay la inoogu cadhoon… Walee reerkaan ogaa ma guuro….
Gadabuursow shahiid ku dhinta intii Ina Taani dadqalkiisu idin qali lahaayeen
Gadabuursow dadkiina difaaca, dadnimadiina badbaadsha, soo ceshada sharaftii magaciina. Isku duubnaada oo arinkiina mideeya. Dhalintiina u horseeda badbaadinta mustaqbalkooda. Diida SNM ta dadkeena qalanaaya oo u aara dadnimadiina. Difaaciina adkeeya oo qala kaad qabatiin. Calankooda case e dhiigu ka muuqdo qashinka ku tuura oo kiina Awdal State meel walba ka taaga. U ciil dhiciya dadkiina iyo caradiina oo guushu waa dushiinee ku hubsada gacmahiina.
This post has been viewed 238 times.Gaadhsi Dadka:MoreEmail	By awdal
MAAMULKA HARGAYSA OO QAYRAADKA AWDAL STATE FARA BAAS KU HAYA
Dhageyso Waraysi Gaara oo Xiiso badan oon La Yeelanay Musharaxa Jagada Madaxweynenimo ee Maamul G Awdalstate Col Hassan Husein Rirash
Maamulka SNM Oo Lagu Bahdilay Shirka Somalida ee Ka Furmay Dalka Turkey
Madaxwayne Kuxigeenka Awdal State Oo Lakulmaya Xubno Kamida Barlamaanka Midowga Yurub
Northern Somali Unionist Movement (NSUM) An Open Letter to President Ismail Omar Guelleh NSUM Executive Committee Date: 10 May 2012
Baaq ku socda abwaaniinta iyo fanaaniinta ka so jeeda Awdal
Ina Godane iyo Ina Meecaad (From Hargaysa) Ayaa ka mas,uuul ah dhimashada,Macaluusha iyo dhibka Koonfurta Somaliya… Ibraahim Xaaji Jaamac Meecaad (Ibrahim Afqaani) oo la wareegay hogaamintii ururka al-shabaab
Siilaanyo & Cawaankiisa Waxaa Ku Dhacay Jac iyo Baaruud
Buraanbur ay Hooyo reer Awdal ahi u tirisay Ugaaska
Haayaddaha Amniga Maraykanka Oo Xukuumadda Siilaanyo Walaac Ka Muujiyay